पौडेल समूहवाट गगन थापा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा Nepalpatra पौडेल समूहवाट गगन थापा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा
पौडेल समूहवाट गगन थापा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा
नेपाली काँग्रेस पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका गगन थापाले गुट परिवर्तन गरेका छन्। सिटौलको खेमामा रहेका थापा बिहीबार भने रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्।
पौडेल पक्षले आउँदो महाधिवेशनबारे जानकारी दिन पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थापा सहभागी भएका हुन्।
यससँगै थापा रामचन्द्र पौडेल समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवार घोषणा गरेका थापा पौडेल समूहको कार्यक्रममा देखिएका छन् । यो सँगै थापा पौडेल समूहमा प्रवेश गरेको बुझिएको छ ।
सभापतिको उम्मेदवार धेरै भएकाले पौडेल समूह साँझा उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारीमा छ । रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी हुन् । तर, पौडेल समूहले अहिलेसम्म पनि सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन ।